Ụbọchị My Pet » Ndi fi, A Boomerang enyi nwoke?
emelitere ikpeazụ: Ka. 21 2020 | 2 min agụ
"Ọ na-hụrụ m n'anya. Ọ hụrụ m. "—Ncheta
Kwa girl ka akara ụbọchị a Ihọd. Ọ bụ dị ka nkịtị dị ka allergies ke n'oge opupu ihe ubi. Ladies, ị maara edemede ...
O chere na ahihia bụ greener n'akuku nke-ọzọ. Ma ọ bụ ọ "dị mkpa ya ohere." N'ihi ya,, na-enweghị ọtụtụ ịdọ aka ná ntị, ọ na-eme a nike omume nke na-ga-eme ka ọbụna Houdini mpako.
Ị na-eti mkpu. Ị ịjụ ihe mere. Mgbe ahụ mechara, na oge ụfọdụ na anya n'etiti gị, ị jikwaa agwọ obi gị na-aga.
N'ụzọ tụrụ gị n'anya, ọnwa / afọ mgbe e mesịrị ọ na-alaghachi. Nke a na oge na-acha uhie uhie Roses, arịrịọ maka mgbaghara, na ọchịchọ siri ike ịtụte ochie akpalikarị. Ọtụtụ mgbe, mgbe ị na na-aghọ mmasị na onye ọhụrụ.
The 64,000 ajụjụ na-aghọ ... Kwesịrị ị na-enye azụ, ma ọ bụ na-eme gị n'ihi na ihe isi ọwụwa na nsogbu ndị maka ọdịnihu?
Ọfọn, ya niile na-adabere ....
A na-eji Aghọ Aghụghọ Ule A mpempe akwụkwọ iji dị ka ụkpụrụ na.
Ndi enye agbaji nke kadinal iwu nke mkpakọrịta nwoke na nwaanyị? Ndị a ga-abụ ọ dịghị-nos dị ka ịghọ aghụghọ ule na gị enyi kasị mma ma ọ bụ ikwu, ma ọ bụ ime ihe ike nkịtị, ma ọ bụ emebi gị obi. Ọ bụrụ otú ahụ, "Adịghị agafe na-aga."
Ka a nọworo na-ezu oge maka ya ka nwere matured na-abịa okwu na ihe mere? Ndi enye n'ezie na-aghọta mmehie nke ụzọ ya? Ọ bụ eleghị anya agụụ maka ihe m maara?
Gịnị ka ọ chọrọ mmekọrịta ọhụrụ? Ọ bụ n'ihi na onwu n'etiti unu abụọ bụ otu na-ekpo ọkụ? Ndi enye mkpa gbaziri ego ma ọ bụ ebe a na-anọ? Ntụsara bụ mgbe a ezi ihe mere hụ. Ekwela ka ya na-abịa azụ eje ozi dị ka a setback n'ihi na ị.
Olee otú o akwụsị ihe? Ndi usoro ya oyi na callous? Ma ọ bụ ụdị na-abụghị ụta? Dị ka ọmụmaatụ, ụmụ okorobịa ndị na-ụjọ si ezere ụzọ site agwụcha ekwentị niile kọntaktị niile a na mberede, ma ọ bụ na-eziga gị a ederede ozi nsọtụ ihe bụ adịkarịghị uru hooking na ọzọ.
Ndi nwere ihe ihe ọma banyere ya na ihe ọjọọ? Mee a uru na ọghọm ndepụta ahụ ịkpọ ya amamihe na anya. Ọtụtụ ihe, ịṅa ntị na sage ndụmọdụ nke Maya Angelou: "Mgbe ndị mmadụ na-egosi gị ndị ha bụ, kwere na ha. "
Dịkwa ka ihe dị mkpa dị ka ndị gbara ha gburugburu na ọnọdụ gị gbasaa bụ usoro iheomume. Ndi enye eri si nri n'ihu Christmas? Mgbe ị ghọrọ ọrịa ma ọ bụ ala na gị chioma? Bụ mmadụ ndị "ngosi-weathered enyi" na-agachaghị igu on n'oge ihe siri ike. Tụlee onwe gị kechioma na chọpụtara, ma ọ bụrụ na nke a bụ ikpe. Bee gị losses.
Unu tiekwa mkpu na champeenu iko dị nnọọ ma. Tụlee na-ewere ya azụ a "probationary oge" na "mmachi na ịnweta." N'ihi ezigbo results, obi ga-"akwụ" ọ bụghị chere.
Mgbe ị na-ahụ mebiri n'elu, bụ n'ebe a okwukwe nke ndị mmadụ chiming na, "Agwara m unu otú?" Ọ bụrụ na onye ọ bụla ọzọ chere na ọ na-erughị eru gị, e nwere ike ịbụ a mgbe ebe a. Unu na-eleghara a ejighị ya kpọrọ. Ọ bụ ezie na ịhụnanya nwere ike ịbụ ìsì, Ọ na-ekwesịghị ịbụ ihe ziri ezi kwa.
Ị nwere ike imeli chaa chaa gị adịghị mma na ùgwù onwe onye ọzọ?
E nwere o doro anya na mgbe ụfọdụ na-ewere a ohere nwere ike ịbụ a ọjọọ-agba chaa chaa. Ị na ugbu a na ihe ọzọ mmekọrịta nke nwere ekwe nwere? Ke idaha emi, na "comeback eyen" ekwesịghị ikwe na-abịa azụ!
Tụlee ihe a na-adọ Atụmatụ na-emeso ndị Boomerang enyi nwoke. Eburu n'uche na "Ndị na-amụta site n'oge gara aga na a kara aka na-ekpeghachi ya."